Tombony ho an'ny vokatra - TIGERNU LEATHER Co., Ltd.
Nylon, fanadiovana kitapo Oxford lamba
Sasao amin'ny rano ambany noho ny 30 degre. Rehefa avy milentika amin'ny rano sy ny detergent isan'andro dia afaka miborosy moramora amin'ny borosy malefaka ianao. Aza aseho ny ilan'ny lamba Main ambanin'ny masoandro. Alefaso avy ao anatiny ka hatrany ivelany aorian'ny fisasana.
Fanadiovana kitapo canvas
Ny kitapo vita amin'ny lamba rongony dia tokony ho diovina maina araka izay azo atao (sasao mora manjavona, aza mampiasa detergents misy mpamono mandro na fluorescent). Raha tsy maintsy hosasananao amin'ny rano izy ireo, atsobohy anaty rano mangatsiaka, ary aza aseho eto ambanin'ny masoandro, dia asaina manaloka sy maina izy ireo. Rehefa manasa voalohany, dia afaka manampy sira kely na vinaingitra fotsy amin'ny rano madio, ary avy eo alemana ao anaty rano mandritra ny 30 minitra mba hisorohana ny fahalalany.
Pu artifisialy -Mba kitapo
Mampiasà lamba malefaka madio handrobohana areti-nify na mpanadio kely amin'ilay kitapo mila diovina. Avy eo ianao dia afaka manoboka rano kely kokoa ary mamafa azy moramora. Farany, afaka mampiasa lamba malemilemy iray hafa ianao hitsaboana ny tampony. Azonao atao ihany koa ny mampiasa mpanazava hoditra kely amin'ny kitapo. Raha tsy manana dia afaka mampiasa crème tanana kely fa tsy afaka mampiasa be loatra. Hamirapiratra toy ny vaovao ilay kitapo. Aza atsofoka anaty rano mihitsy ilay hoditra ary diovy. Raha efa lany ny hoditra dia azonao atao ny manisy crème fikojakojana tsy misy menaka tsy misy menaka amin'ny faritra tonta. Rehefa avy miditra tsimoramora izy dia azo kosehina amin'ny lamba madio sy malefaka, izay afaka hamirapiratra indray ny hoditra ary hisorohana ny hoditra tsy ho maina.
TIGERNU dia namorona zipper roa tsy manam-paharoa Anti halatra
Isa patanty: ZL2013 2 0083407.6
Famolavolana firafitra mahay, afeno ny zipper sy ny paosy.
Ny fampiharana ergonomika amin'ny tadin'ny soroka sy ny lamosina dia miaro tanteraka ny hazondamosina.
Efitra azo ampiharina, ampy ho an'ny lahatsoratrao isan'andro.
Lamba malala-tontolo iainana, manao veloma ny alèjika amin'ny hoditra.
Kalitao matanjaka, araho miaraka aminao mandritra ny fotoana maharitra.
Brand Bag malaza indrindra any Russia, Azia atsimo atsinanana, Korea atsimo.
Kitapo matevina Patanty No..: ZL2013 2 0083407.6
Ampahany misokatra misokatra:ZL 2016 2 0256788.7
Solosaina finday azo alefa mampitohy: ZL 201320005715.7